Fitaovana fanetezana amoron-dranomasina | Fanarenana ny tany | Fanaraha-maso ny tondra-drano
Ny fiarovana sy ny famerenana indray ny torapasika sy ny fanavaozana ny tany dia ilaina amin'ny fiarovana ny harena voajanahary.
Ny fananganana tany vaovao sy famerenana amin'ny laoniny ireo tany tondra-drano dia fahita eran'izao tontolo izao amin'ny fampandrosoana trano sy ho an'ny fanarenana ireo faritra simba-by. Ny dredges an'i Ellicott dia ampiasaina hantsaka fasika sy rano amoron-dranomasina hiverina amin'ny toerana nisy azy.
Ellicott dia manolotra maodely dredge maromaro izay malaza amin'ny tetikasa fandavahana amoron-dranomasina. Ny ekipan'ny varotra manam-pahalalana dia hiara-miasa aminao hamantatra ireo fitaovana mety indrindra amin'ny filàn'ny tetikasa.
Mifandraisa aminay momba ny zavatra ilaina amin'ny dredging
18 "x 18" (450 mm x 450 mm)
Sheet manokanaHizaha horonan-tsary
20 "x 20" (500 mm x 500 mm)
Sheet manokanaJereo ny Virtual Tour
Andiany 460SLM Swinging Dragon® Dredge
Series Series 860SL mitsoka Dragon® Dredge
Super Dragon ™ Dredge
26 "/ 650 mm
Series 4170 Super Dragon ™ Dredge
27 "x 24" (700 mm x 600 mm)
Famerenana amin'ny laon-dranomasina
Tsy misy natiora reny mijanona tsy hihinana eny amoron-dranomasina sy ny morontsiraintsika planeta. Araka ny fomba nentim-paharazana, ny fikaohon-dranomasina dia vokatry ny fihodinan'ny rano, ny onja, ny onja ary ny toetrandro ratsy. Ny morontsiraka izay naverina tamin'ny laoniny tamin'ny dredging dia natao hiarovana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny fahasimban'ny tafio-drivotra sy hitehirizana ny toerana amoron-dranomasina fialamboly
Ny lalànan'ny dredge misy antsika dia manampy amin'ny fifehezana ny halalin'ny fantsona sy hamerenany ny torapasikin'ny vondron'olona manerana an'izao tontolo izao amin'ny toerana toa an'i Fuller Street Beach any Edgartown, Massachusetts (USA) ary ny San Antonio River Inlet, Buenaventura, Colombia.
Fitrandrahana ny tany sy fanorenan'ny Nosy
Rehefa mitombo ny tsena manerantany ary mitombo hatrany hatrany hatrany ny olona mifindra monina sy mitsidika ireo toerana amoron-tsiraka akaiky toa an'i Apollo Bay, Melbourne, Australia, ary Matira Beach, Bora Bora dia miteraka filàna lehibe amin'ny tetikasa fanodinkodinana tany.
Ny dingan'ny fanodinana tany dia misy fitrandrahana fasika, tanimanga na vatolampy amin'ny fanambanin'ny ranomasina ary apetraka ireo singa mba hamorona tany vaovao any an-toeran-kafa. Nandritra ny tantaran'i Ellicott dia nandray anjara tamina tetik'asa fanavotana tany lehibe izahay izay nanampy tamin'ny fanamafisana ny seranan'i Los Angeles, California (Etazonia) sy Port Said, Cario, Egypt.
Fanaraha-maso ny tondra-drano
Ireo mpifanolo-bodirindrina manamorona ny renirano dia mora tratry ny tondra-drano isan-taona mandritra ny vanim-potoana orana. Raha tsy voatazona tsara ny renirano na ny lalan-drano, dia hiakatra tsikelikely ny silt, fasika ary potipoti-javatra ka miteraka tavoahangy. Rehefa misy fisehoan-javatra manan-danja amin'ny orana dia mametra ny renirano, lakandrano na lalan-drano ny tavoahangy, afaka manome rano mikoriana voajanahary ka mahatonga ny haavon'ny rano hiakatra sy hitranga ny tondra-drano.
Ny tetik'asa fisorohana rano sy fisorohana ny rano dia miasa mba hitazonana ny halalin'ny fantsona, ary ny hafa ampiasaina amin'ny fanalefahana ny tondra-drano. Ny tetikasa sasany mifandraika amin'ny tondra-drano dia mitaky ny fanesorana ireo fitaovana maloto.
370 Dragon Dredge dia namita ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny atsimo andrefana
Jhelum Conservation voavonjy lohasaha avy amin'ny tondra-drano: Govt
Great Lakes Dredge & Dock Mampiasa Dredge an'ny Cutic Brand an'ny Ellicott® ho an'ny fiarovana an'i Keta Sea any Ghana, Afrika